Kubata HAKUSI KUSVITIRA Kiyi Yekuita Chiratidziro (KPI) yeMazhinji Makambani | Martech Zone
Chipiri, Zvita 16, 2008 Chipiri, Kurume 2, 2021 Douglas Karr
Usanditenda? Iko kambani yako inoita marii kubva kumashoko? Iko kambani yako inoita marii kubva kune avo vanhu vanotaura? Iko kambani yako inoita marii kubva kuvanhu vanotaura pane ako enhau midhiya?
Kubata, sekuyerwa nemhinduro kana kutora chikamu, is zvisina maturo kune ruzhinji rwemabhizinesi. Zvakawanda nyanzvi tout iyi metdball metric, ichitaura kuti neimwe nzira ichaendesa kumari, sekudhonza tsuro kubva kuheti. Ava ndivo vamwe varume vakashambadzira kushambadza kwesokisi zvidhori muSupp Bowl kushambadzira kwemakambani akabuda mubhizinesi.
Pane chero munhu aratidza kuwirirana pane chero yemagariro enhau saiti kana blog yakaratidza hukama hwakananga pakati pekushandurwa nemhinduro? Pamasaiti andakaona, makomendi akanyorwa nevanhu vangangodaro vasina kuzotenga… shamwari, vatinoshanda navo, vanopokana, uye vanhu vari kuyedza kuvaka masimba epamhepo. Kunze kwavo vese, zviri kusahadzika kuti chero wavo anogona kutenga.
Engagement haifanire kuyerwa mune zvakataurwa kana mhinduro dzemagariro kunze kwekunge iwe uchikwanisa kusunga iko kubatana zvakananga kune inotevera mari. Makomendi uye nhaurirano hazvimbofaniri kuve metric yekubudirira kune bhizinesi kunze kwekunge iwe uchikwanisa kuratidza kuti zvinokanganisa yako kutendeuka mitengo.
Kusarudzika: Mukurumbira online
Imwe bhenefiti isina kunanga ndeye kubva kumhinduro dzakanaka pane vezvenhau, izvo zvinogona kuvandudza bhizinesi rako online mukurumbira - uye pakupedzisira inotungamira vamwe vatengi kana mabhizinesi kutenga kubva kwauri zvichibva pane iro mukurumbira. Iko kurumbidza uye kurudziro igoridhe chairo… asi kazhinji zvakangooma sezvangu kumigodhi midhiya yenhau.
Iwe unoda kuve kuroorana nevatengi vako? Ehe! Mubvunzo ndouyu: Vanhu here avo ndivo kuroorana chaizvoizvo vatengi? Pamwe kwete!
Ini handisi kuyedza kuratidza chero kusaremekedza kana kubvisa kubva mukukoshesa kwandinako kune avo imi munotora chikamu mu blog yangu. Ndinoda makomenti! Makomendi ndeemukati-anogadzirwa zvemukati izvo zvandinotenda zvinobatsirawo nekuchengetedza mapeji angu ari vapenyu mukutaurirana uye pane injini dzekutsvaga. Izvo zvisina kunanga zvinoreva mari kwandiri sezvo ini ndichigona kuratidza kuenderana kwakanangana pakati penhamba dzemashoko nenhamba yekushambadzira kushambadza.
Iwe hausi kumhanyisa chinyorwa, zvakadaro. Uri kuita bhizinesi.
Saka Chii Chinonzi Kubatanidzwa?
Kubatanidzwa kufona, kukumbira demo, kurodha pasi kurodha pasi, chikumbiro chekukumbira ... kana kutenga chaiko. Kubata chero chiitiko chingaitwe zvakananga kune mari iriko inogadzirwa neako pamhepo.
Kana kambani yako iri kuyera kushanda kwe blog yako, iwe unofanirwa kuverenga iyo yechokwadi Dzoka pane Kushambadzira Investment:
ROMI = (Shanduko * Revenue) / (Yese Mutengo weManpower + Yese Mutengo wePuratifomu)
Ngatizvibvisei izvi Kubatana hocus-pocus uye tanga kutaura nezve chaiyo metric yebudiriro… imarii iri kuitwa nekambani yako kuburikidza nedhijitari yayo yekushambadzira.
Izvo hazvisi izvo zvakaoma. Mumwe muenzaniso ndeyekubvuma kwaDell kwazvino kuti ivo vakakwanisa kuwedzera Twitter pamadhora anodarika chiuru chemadhora mumari!
Pima chii kuverenga! Kana kambani yako iri kuita zvemagariro marongero, izvo zvinonakidza. Iva akatendeseka, iva pachena, vhura nzira yekutaurirana kune ako tarisiro (kazhinji vanotsvaga) uye pima kukanganiswa kwekushanda kwako nesimba… nemari!
Tags: blog commentsmashokoKubatanakpikushambadzira kpisaiti zvirevowebhusaiti kubatanidzwa
Zvita 19, 2008 na6: 50 PM
Zvakaoma chaizvo kumakambani kuyera kubatanidzwa hazvo. Sezvo vazhinji vavo vachihaya mumwe munhu kuti aite macampaign avo (twitter, myspace, facebook, nezvimwewo) vanogona kusaziva zvekuyera. Kana iyo whiz bang consultant ikati iri kushanda, inofanirwa kunge iri chokwadi? Mushure mezvose anoramba achitaura kuti zvakakura sei uye kuti tinofanirwa kufunga nezvekuwedzera bhajeti redu rekushambadzira.